Natalie Portman Muuqaallo Galmo Qaawan & Topless LEAKED Sawirro - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Natalie Portman Muuqaallo Galmo Qaawan & Topless LEAKED Sawirro
Fiiri mid ka mid ah haweenka ugu raaxada badan nolosha, atariishada Natalie Portman boobs qaawan iyo dameer iyada lesbian iyo goobaha galmada, sidoo kale iyada sawirada paparazzi topple ee this ururinta kama dambaysta ah!
Natalie Portman (38 jir) waa aktarad u dhalatay Israel iyo Mareykan. Ilaa maanta, waxay ku guuleysatay Abaalmarinta Akadeemiyadda iyo laba abaalmarinta Golden Globe. Doorkeeda ugu caansan waxaa ka mid ah filimada 'Léon: The Professional', 'Star Wars: Episode I - The Phantom Menace', 'Star Wars prequel trilogy', 'The Seagull', 'Closer', 'V for Vendetta', 'The other' Gabadha 'Boleyn Girl', 'Black Swan', oo ay ku guuleysatay Abaalmarinta Akademiyada ee Aktarada ugu fiican. Kadib waxay ka soo muuqatay ‘No Strings Attached’, ‘Thor’, iyo ‘Thor: The World World’. Waxay cod dheer ku leedahay siyaasada America iyo Israel waxayna udoodaa xuquuqda xoolaha. Portman wuxuu guursaday qoob ka ciyaarka Benjamin Mille laga soo bilaabo 2012, waxayna leeyihiin laba carruur ah.
Natalie Portman naasaha qaawan ee sawirada paparazzi
Fiiri sawirada paparazzi ee dusha sare Natalie Portman. Waxay qorax qoraneysay ka dibna waxay iska saartay qeybta sare ee bikini. Ilkaheeda yar yar iyo ibta adag ayaa qaatay xoogaa qorrax ah oo xoogaa qoraxdu gubatay. Kadib waxaan haynaa Natalie Portman sideboobs, oo la kashifay markii ay kaqeybgashay 'Downtown Casho' oo lagu qabtay bartamaha magaalada Manhattan, New York. Waxay xidhnayd dhar qalin ah oo dabacsan, oo aan lahayn rajabeeto. Waxay muujineysaa xoogaa maqaar aad u badan, laakiin gaar ahaan jilbaha, ama waxaa fiican in wax walba la dhaho laakiin ibta naaska!
Natalie Portman oo qaawan lesbian & muuqaallo galmo ah
Muuqaalka labaad, Natalie Portman waxay siigaysatay qolkeeda jiifka! Waxay xirataa saraawiil midabkeedu casaan yahay iyo funaanad isku midab ah. Natalie nafsadeeda ayey ku ciyaareysaa, waxay taabaneysaa xubinta taranka ilaa ay ka aragto qof albaabka jooga!
Muuqaalka seddexaad, jilaaga reer France ee Vincent Cassel ayaa milateriga xafiiska ku dul shubaya Mila Kunis. Natalie Portman ayaa daawaneysa iyaga waxayna ismoodsiineysaa meesha Mila ’! Kunis wuxuu gashanayaa rajabeeto madow wuxuuna la taahayaa sida xiddig dhab ah oo jilicsan. Waxaad ubaahantahay inaad go aansato cida uquudi laheyd halkii, kuleylka iyo waallida madow Mila Kunis qaawan ama qurux qurux badan Natalie Portman?
'Xarig Kuma Xidhan'
Halkan waxaa ku yaal Natalie Portman saddex muuqaal oo qaawan oo jinsi ah. Midka hore wuxuu ina tusayaa muuqaalka galmada Natalie Portman iyo jirkeeda kulul. Waxaan aragnaa naasaheeda oo qaawan sida ay ugu wareegayaan iyada oo nin sariir saaran. Boobkeeda qaawan ayaa isaga ku cadaadisay. Kolkaasay iyada oo qaawan sariirta sariirta dhabarka ugu jiifta nin sare, lugaheeda waa sarreyaan isaguna dabada ayuu ku hayaa. Waxay leeyihiin galmo xoog leh.
Kadib waxaan ku darnay Natalie Portman boobsyo qaawan oo muuqaal galmo qaawan ah, halkaas oo ay sidoo kale galmo adag kula leedahay nin sariirta saaran. Dhabarka ayey u jiifsaneysaa isaguna wuxuu ku caayayaa meel loogu adeego.
Midda saddexaad waa muuqaalka qaawan ee Natalie Portman. Natalie Portman dameer qaawan iyo xoogaa jeexan oo buluug buluug ah ayaa iyada ah! Markay sariirta ka soo kacdo waxaan si dhakhso leh u aragnaa badhideeda qaawan. Kadib waxay bilaabeysaa inay labisto oo ay banaanka soo dhigto kala-jeexitaankeeda.
Muuqaalka koowaad, waxaan arki karnaa Natalie Portman oo jiifa sagxadda qolka xabsiga. Waa qaawan tahay oo markay jilbaha u kacdo, sifiican ayaan u arki karnaa jirkeeda oo qaawan. Portman wuxuu na siinayaa aragti aad ufiican oo ku saabsan badhida iyo boogaha.
Midka labaad, Portman waxaa lagu arkaa meel aad u dhib badan, lug buuxda oo buuxda waxay muujineysaa sifooyinkeeda galmada. Waxay ku fariisataa sariir ay lugaha kala fidsan yihiin iyo surwaal dhinac u jiiday. Saaxiibkeed ayaa leh aragti fiican isla mar ahaantaana waxay ka siibaysaa boobkeeda midig iyadoo ibta naaska ka soo baxayso rajabeeto. Tani waa muuqaal Natalie Portman oo qaawan oo muuqaal galmo ah oo laga keenay filimka 'U Dhaw'.
Muuqaalka seddexaad wuxuu ku siin doonaa Natalie Portman iyo dameerkeeda qaawan. Waxay hor istaagtaa nin iska siibay surwaalkeeda iyo badhideeda yar laakiin adag. Waqtiga qaar, waxaan arki karnaa qayb ka mid ah ibkeeda ibta oo qaawan.
Dameerta Natalie Portman ayaa halkan mar kale timid! Muuqaalkaan qaawan waxaad ku arkeysaa Natalie Portman oo iska bixineysa bikinimadeeda markii ugu horeysay markii ay dul dhigeysay tuwaalka gabi ahaanba qaawan, iyadoo muujineysa dameerkeeda qaawan Ninbaa biyo ku rusheeya dameerta Natalie, way qoysay!
Hot Natalie Portman oo aan ciriiri lahayn ayaa fuushan nin madow, dhamaadka soo uruurintan! Waxay xiriir la leedahay nin madow halka ninkeedu maqan yahay! Natalie Portman oo ku raaxeysaneysa galmada iyo cowskaan weyn ee madow, waxay leedahay kacsi oo galmadu way joogsataa!
Natalie Portman sexy iyo cagaha sawiro
Waxaan aragnay aruurin aad u tiro badan oo sawirada galmada leh ee Natalie Portman. Laakiin midkani waa sabab gaar ah waxay imaanaysaa qaawanaanta ka dib. Kaliya si aad ugula kacdid ciyeygaaga kadib markaad timid. Portman waxay leedahay cago qurux badan, lugaha, iyo kalagoynta waxayna jeceshahay inay muujiso dhamaantood. Portman-na wuu garanayaa sida wax loo sawiro. Waxay noqon doontaa wax la yaab leh ka dib sannadahan oo dhan markii ay caan noqotay, iyada oo xishoonaysa…
headey Lena sawiro qaawan
daniel american pickers qaawan
cajalada galmada molly ringwald
rajaynayaa xiisaha Solo qaawan
jare Samara xiisaha qaawan